China 330kV kaviri loop mutsetse tower Manufacture uye Fekitori | XY Tower
Tubular Simbi Matanda
Simbi Tube Tower
Hutano, Dziviriro & Nzvimbo
330kV kaviri loop line tower
Kugamuchirwa kushanyira webhusaiti yedu. XY Tower ndeimwe yemakambani anotungamira mushongwe-yekugadzira indasitiri kumadokero kweChina.
XY Tower inopa akasiyana galvanized simbi zvivakwa, anonyanya kufambisa shongwe, substation chimiro, shongwe yekutaurirana, nezvimwe. Neboka revashandi vanokurudzirwa, tinoita chisungo chekupa chigadzirwa chemhando yepamusoro uye basa rehunyanzvi kune vese vatengi vedu. Tiri kutarisira nemwoyo wose kushanda pamwe.
Nei XY Tower
Infrastructure ye XY Tower：
Mwoyo wenzvimbo ipi neipi yekugadzira zvinhu zvayo. XY Tower ine simba rakaiswa rekugadzira 30,000 matani eshongwe pagore.
XY Tower yakagadzirira kusangana neakanyanya kuomesera mhando zviyero.
Zvimiro zvakagadziridzwa zvakanaka, michina yekugadzira michina uye zvivakwa zvakakura zvekuchengetera simbi zvinopa XY Tower zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Chigadzirwa chekugadzira paChengdu chakavakirwa panzvimbo inoyera 35,000 sq. mita. Inosanganisa vanhu vane hunyanzvi nehunyanzvi hwekugadzira zvigadzirwa zvemazuva ano kuti ive nechokwadi chezvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Yakavakwa pane imwe 7000 sq. Meta yevhu yemuti we galvanizing.
Inosanganisira tekinoroji yazvino yekupisa dip galvanizing yezvakasiyana zvimiro.
transmission tower chimiro chakareba, kazhinji shongwe yesimbi yesimbi, inoshandiswa kutsigira tambo yemagetsi pamusoro. Isu tinopa zvigadzirwa izvi nerubatsiro rwe
vashandi vanoshingaira vane ruzivo rwakakura mundima iyi. Isu tinoenda kuburikidza yakadzama mutsara ongororo, nzira mepu, kuona shongwe, machati chimiro uye gwaro rehunyanzvi tichipa zvigadzirwa izvi.
Chigadzirwa chedu chinovhara 11kV kusvika 500kV uku ichisanganisira dzakasiyana shongwe mhando semuenzaniso suspension tower, strain tower, angle tower, end tower etc.
Pamusoro pezvo, tichine yakakura yakagadzirirwa mhando yeshongwe uye dhizaini sevhisi yekupihwa nepo vatengi vasina kudhirowa.
Voltage giredhi 220/330kV
Nominal urefu 18-48m
Nhamba dzebundle conductor 1-6
Kumhanya kwemhepo 120km/h
Hupenyu hwose Kupfuura makore makumi matatu
Production standard GB/T2694-2018 kana mutengi anodiwa
Raw Material mwero GB/T700-2006,ISO630-1995;GB/T1591-2018;GB/T706-2016 kana Mutengi Anodiwa
Ukobvu ngirozi simbi L40 * 40 * 3-L250 * 250 * 25; Plate 5mm-80mm
Production Process Muedzo wezvinhu zvakasvibirira → Kucheka → Kuumba kana kupeta → Kuongororwa kwehukuru → Flange/Zvikamu welding → Calibration → Kupisa Galvanized → Recalibration → Package
Kurapa kwepamusoro Kupisa dip kwakakurudzira
Fastener GB/T5782-2000; ISO4014-1999 kana Mutengi Anodiwa
Bolt performance rating 4.8;6.8;8.8
Spare Parts 5% mabhoti achaunzwa
Capacity 30,000 matani / gore
Nguva yekuenda kuShanghai Port 5-7 mazuva
Delivery Nguva Kazhinji mukati memazuva makumi maviri zvinoenderana nehuwandu hwekuda
saizi uye uremu kushivirira 1%
huwandu hwekuraira hushoma 1 set
Zvese zvikamu zveshongwe zvinopinda nemuchina-chinangwa hydraulic muchina unogona kuita mabasa akasiyana sekuveura, kubaya uye kucheka. Hydraulic presses pamwe chete nematurusi anoenderana, jigs uye zvigadziriso zvinovimbisa kuti zvinhu zvakabhenda zvinobatwa pasina kukanganisa. Crane dzakamisikidzwa zvine hungwaru dzinorerutsa kubata kwezvinhu pasina kunetsa pavashandi. Michina yese yakashongedzerwa kugadzirisa simbi inoenderana neakasiyana zvirevo semuenzaniso ISO, ASTM, JIS, DIN.
XY Tower ine yakanyanyisa bvunzo protocol kuti ive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvatinogadzira ndezvemhando. Iyo inotevera maitiro inoshandiswa mukuyerera kwedu kwekugadzira.
Zvikamu uye Ndiro
1. Kemikari yakagadzirwa (Ladle Analysis)
1. Uchapupu Mutoro bvunzo
3. Ultimate tensile simba bvunzo pasi eccentric mutoro
5. Kuoma bvunzo
Yese data yekuyedza inorekodhwa uye ichaudzwa kune manejimendi. Kana pane kukanganisa kunowanikwa, chigadzirwa chichagadziriswa kana kukweshwa zvakananga.
Hunhu hweHot-dip galvanizing nderimwe resimba redu, Mutungamiriri wedu VaLee inyanzvi munyaya iyi ine mukurumbira muWestern-China. Chikwata chedu chine ruzivo rwakakura muHDG maitiro uye kunyanya kunaka pakubata shongwe munzvimbo dzakanyanya corrosion.
Galvanized mwero: ISO: 1461-2002.
Ukobvu hwe zinc coating
Zinc jasi harina kubviswa uye kusimudzwa nenyundo
Yemahara prototype shongwe musangano sevhisi
prototype tower assembly inzira yechinyakare asi inoshanda yekuongorora kana iyo dhizaini iri chokwadi.
Mune zvimwe zviitiko, vatengi vachiri kuda kuita prototype tower assembly kuti ive nechokwadi chekudhirowa uye kugadzirwa kwakanaka. Nekudaro, isu tichiri kupa prototype tower musangano sevhisi yemahara kune vatengi.
Mune prototype tower musangano sevhisi, XY Tower inoita kuzvipira:
• Kune nhengo yega yega, kureba, nzvimbo yemakomba uye kuwirirana nedzimwe nhengo kuchatariswa nemazvo kune kusimba kwakakodzera;
• Huwandu hwenhengo yega yega uye mabhaudhi anozonyatsotariswa kubva mubhiri rezvinhu pakuunganidza prototype;
• Dhirowa uye bhiri yezvinhu, saizi yemabhaudhi, mafirita nezvimwe zvichadzokororwa kana paine chikanganiso chinowanikwa.
Basa rekushanya kwevatengi
Isu tinofara kuti vatengi vedu vanoshanyira fekitori yedu uye kuongorora chigadzirwa. Iwo mukana wakanaka wekuti mativi ese maviri azivane zviri nani uye kusimbisa kubatana.Kune vatengi vedu, tichakugamuchirai kuAirport uye tinopa 2-3 mazuva ekugara.
Package uye kutumira
Chidimbu chese chezvigadzirwa zvedu chakadhindwa zvinoenderana nekudhirowa kwakadzama. Yese kodhi ichaiswa chisimbiso chesimbi pane chimwe nechimwe. Zvinoenderana nekodhi, vatengi vanonyatsoziva chidimbu chimwe chete ndecherudzi rwupi uye zvikamu.
Zvidimbu zvese zvakaverengerwa zvakanaka uye zvakaputirwa kuburikidza nedhirowa iyo yaigona kuvimbisa kuti hapana kana chidimbu chisipo uye nyore kuiswa.
Kazhinji, chigadzirwa chichagadzirira mumazuva makumi maviri ekushanda mushure mekuisa. Ipapo chigadzirwa chichatora 5-7 mazuva ekushanda kuti usvike kuShanghai Port.
Kune dzimwe nyika kana matunhu, seCentral Asia, Myanmar, Vietnam, nezvimwewo, China-Europe chitima chekutakura uye kutakurwa nenyika kungave nzira mbiri dziri nani dzekufambisa.
Kazhinji isu tinotora bvunzo dzemuviri & makemikari bvunzo, pazasi ndiyo bvunzo maitiro uye zvishandiso.
Muedzo Wemuviri: Hydraulic Univerasl Yekuyedza Furnace & Hardness tester
Muedzo weKemikari: Kupa mvura → Digital Display Spectrophotometer → Analytical Balance →Microcomputer Carbon Uye Sulfur Analyzer
Zvakapfuura: 500kV high voltage transmission tower
Zvinotevera: 220kV Double Loop Transmission Tower
330kv mutsetse kutapurirana
330kv tambo yemagetsi
330kv simbi shongwe
kona simbi fekitari
China fekitari yakananga vatengesi
Head Factory:Aihwa. 528, West Section, Liutai Avenue, Chengdu, China HDG Factory:Nhamba 366, Tongxin Avenue, Chengdu, China
© Copyright - 2019-2021: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.